एउटै कक्षामा कानुन विषय पढ्दै आमा छाेरासं !हौसलाको लागि सेयर गरौ ! - समृद्ध नेपाल
सुर्खेत, । उनको जीवनमा करिब दशकअघि बन्द भएको शिक्षाको ढोका बल्ल खुलेको छ । कक्षा ११ र १२ मा सुर्खेतमा कानुन विषय पढाइ हुन थालेपछि उनी उत्साह बोकेर पुन: भर्ना भएकी छन् । आफू मात्र होइन, एसएलसी पास भएकै वर्ष जन्मिएको छोरा सुशान्तलाई पनि सहपाठीका रूपमा कानुन अध्ययनमा डोर्‍याएकी छन् कमलाले ।
आमाछोरा सँगसँगै पढेको लाभ निकै छ । कक्षाकोठामै अभिभावक हुँदा सुशान्त ढुक्क छन् । उनको ध्यान पढाइबाहेक अन्यत्र जाँदैन । ‘कापीकलम किन्ने, भर्नालगायत शुल्क कहिले तिर्ने, कसरी तिर्ने भन्ने ‘टेन्सन’ नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘ममी सँगै भएपछि मलाई पढाइबाहेक अन्यत्र ध्यान दिनै पर्दैन ।’कमलालाई पनि सजिलो छ ।
कहिलेकाहीँ घरव्यवहारले पढाइ छुट्यो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता हुँदैन । साताअघि छोरी (सुशान्तको बहिनी) बिरामी पर्दा कमला दुई दिन गयल भइन् । शिक्षक गीता कोइरालालाई चिन्ता लाग्यो अब कमलालाई छुटेको पाठ कसरी पढाउने ? ‘म यहीबारे सोचिरहेकी थिएँ, उनले (कमलाले) त स्कुलमा पढाइ भएको सबै नोट छोराले दिइसक्यो पो भनिन्,’ कोइरालाले भनिन्, ‘आमाछोरा सँगसँगै पढ्दाको फाइदा योभन्दा बढी के हुन सक्छ र ?’ साउन ३१ । यो दिन कमला– सुशान आमाछोराको जीवनमा विशेष थियो । उनीहरू पहिलोपटक एउटै कक्षामा एउटै विषय सँगसँगै पढ्दै थिए ।
कक्षाकोठाभित्र पस्नेबित्तिकै आमाछोरा पहिलो बेन्चमा सँगै बसे ।दोस्रो दिन ? फरक थियो । सुशान्त आमासँग होइन, अर्कै केटा साथी बनाएर उनैसँग बस्न पुगे ।
आमा पनि के कम, उनी छात्राको लाइनमा पुगेर केटी साथीसँगै लहसिइन् तर अहिले पनि आमाछोरा सँगैसँगै स्कुल जान्छन् । एउटै कोठामा, तर फरकफरक बेन्चमा बसेर पढ्छन् । फर्किंदा भने सँगसँगै फर्किन्छन् । कमला भन्छिन्, ‘हामी आमाछोराको गन्तव्य एउटै हो, कानुन पढेर सामाजिक न्यायमा योगदान दिने ।
बिहे गर्छु भन्दै ६ बर्ष सँगै ! अन्तिममा त क्षेत्री हो म बाहुन हो हाम्रो बिहे हुदैन ! (भिडियो)
नासा यानले मंगल ग्रहमा अवतरण गरेलगत्तै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्षद्वारा मीना नामक रोबोट निर्माणको घोषणा
उज्यालो ल्याउनेलाई सम्मान गरौं : हरिवंश आचार्य
फक्तालुङ गाउँपालिकामा भीरबाट लडेर २ जनाको मृत्यु !
केटीहरुले नुहाउँदा खेरि यस्ता कुराहरु सोच्छन !
लाग्थ्यो प्लेन चढ्ने मान्छे एकदमै राम्रा धनी खुसी र हाइक्लासका हुन्छन !
सृष्टिको घटना सुनेपछि श्रीमानको घर र माइती शोकमा !
भर्खरैः विमान दुर्घटना सबार सबैको मृत्यु !
लुम्बिनी गुरुयोजना ग्लोबल बोलपत्रको प्रक्रियामा !
२७ दिन पछि कोशीमा भेटिएको रमिला राईको सब देबीथानमा अन्तिम संस्कार !
प्रतिष्ठित कम्पनी दराजमा काम गर्ने मान्छे चाहियो !
गुट्खा अड्किएर एक जनाको ज्यान गयो !